Ireo tetik'asa novatsian'i Ogandà famatsiam-bola hiadiana amin'ny famonoam-bola dia miaro ny fizahan-tany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Oganda » Ireo tetik'asa novatsian'i Ogandà famatsiam-bola hiadiana amin'ny famonoam-bola dia miaro ny fizahan-tany
Oganda fanoherana ny famonoana olona
Ny talen'ny Executive Uganda Wildlife Authority (UWA) Sam Mwandha dia nampiantrano ny masoivohon'i Etazonia any Oganda, HE Natalie Brown, tao amin'ny Karuma Wildlife Reserve omaly talata 20 aprily 2020.
Sehatra iray lehibe ho an'ny Oganda ny fizahan-tany amin'ny fiarahamonina ary manampy amin'ny famonjena ny fizahan-tany ny tetik'asa fiarovana ny bibidia.
Ireo mpitsidika ny tetik'asa fizahan-tany amin'ny vondrom-piarahamonina dia miaina lafy tokana sy tena izy amin'ny fiainana Ogandey, satria tarihin'ireo manam-pahaizana niaina tao amin'ny firenena tamin'ny fiainany manontolo izy ireo.
Ny masoivoho amerikana dia nanome toky fa hanohana hatrany an'i Oganda izay nanomboka 30 taona mahery lasa izay.
Ny Andriamatoa Brown dia teo amin'ny faritra naniraka ny masoivoho amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID) izay mikendry ny fampihenana ny fanararaotana sy ny ady amin'ny bibidia (HWC).
Sehatra lehibe ho an'i Oganda ny fizahan-tany amin'ny fiarahamonina ary ireo tetik'asa hiarovana ny bibidia ireo dia hanampy amin'ny fitsimbinana fitsangatsanganana, atrikasa, fampisehoana, fisakafoanana, trano fandraisam-bahiny ary trano honenana, izay natolotry ny vondrom-piarahamonina eo ambanin'io elo fizahan-tany io.
Ireo mpitsidika ny tetik'asa fizahan-tany dia miaina lafiny iray tsy manam-paharoa amin'ny fiainana Ogandey, rehefa mihinana sakafo nentim-paharazana, mihaona amin'ireo mponina, milalao amin'ireo ankizy izy ireo, ary notarihin'ireo manam-pahaizana niaina tao amin'ny firenena tamin'ny fiainany manontolo.